पश्चिम बङ्गालमा बनर्जीको पार्टीलाई बहुमत, भाजपा दोस्रो स्थानमा : RajdhaniDaily.com
Home Uncategorized पश्चिम बङ्गालमा बनर्जीको पार्टीलाई बहुमत, भाजपा दोस्रो स्थानमा
कलकत्ता । भारतको पश्चिम–बंगालमा ममता बेनर्जीको तृणमूल कंग्रेस अत्याधिक बहुमत आउने प्रारम्भिक नतिजाले देखाएको छ । आइतबारसाँझसम्म घोषित पहिलो दुई सीटमा तृणमुल कङ्ग्रेसकी नेतृ ममता बेनर्जी र उहाँकै दलका अर्का एक नेता बिजयी भइसकेका छन् । यद्यपि यसको औपचारिक घोषणा भने भइसकेको छैन ।
पश्चिम बंगालका अतिरिक्त एक केन्द्र प्रशासितसहित पाँच राज्यमा भएको विधान सभा निर्वाचनको मतगणना भइरहेको हो । नयाँ नेतृत्वका लागि गत मार्च र अप्रिलमा विभिन्न चरणमा केरला, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, असम र पाँडेचरीमा निर्वाचन गरिएको थियो । पश्चिम बङ्गलाको नन्दीग्राम क्षेत्रबाट करिब एक हजार २०० मत अन्तरले बनर्जीले बिजयी हुनुभएको छ । बनर्जीको दलले बाँकी २०८ क्षेत्रमा अग्रता कायम गरेको छ भने केन्द्र सरकारको नेतृत्व गरेको प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भारतीय जनता पार्टीले ७९ स्थानमा अग्रता कायम गरेको छ ।
अरु दलको उपस्थिति नगन्य देखिएको छ । कुनै बेला राज्यको निरन्तर नेतृत्व गरेका वामपन्थी दलले जम्मा एक सीटमा अग्रता देखिएको छ । पश्चिम बङ्गालमा पाँच वर्ष पहिले निकै कम सीट ल्याएको भाजपाले यसपटकको निर्वाचनमा निकै सुधार गरेको देखिएको छ । यद्यपि भाजपाले बनर्जीको दललाई पछि पार्न लगाएको परिश्रम भने निरर्थक हुने देखिएको छ । सन् २०१६ मा जम्मा तीन सिटमा समेटिएको भाजपाले ७५ सिट वरपर जित्नसक्ने देखिएको छ । यहाँबाट अघिल्लो निर्वाचनमा ४४ सीट जितेको विपक्षी भारतीय काँग्रेसले आइतबारसम्ममा एक सिटमा मात्र अग्रता कायम गरेको छ ।
अर्थ एजेन्सी - November 14, 2020 0
कला एजेन्सी - January 30, 2021 0
काठमाडौं । शिखा बुक्सले ‘खण्डकाव्य त्रयोदश’ बजारमा ल्याएको छ । यस संग्रह शुक्रबार वाल्मीकि विद्यापीठमा लोकापर्ण गरिएको हो । गोपीकृष्ण शर्मा, प्रा. राजेन्द्र सुवेदी,...
Breaking News एजेन्सी - May 25, 2020 0
सप्तरी, राजविराज । सप्तरीको डाक्नेश्वरी नगरपालिकामा सोमबार कोरोना संक्रमण पुष्टी भएका दुई पुरुष मजदुरी पेशामा संलग्न रहेको खुलेको छ । भारतमा मजदुरी पेसामा सलग्न डाक्नेश्वरी...
प्रदेश एजेन्सी - August 1, 2020 0
प्रदेश ३ एजेन्सी - September 6, 2020 0
खेल एजेन्सी - November 13, 2020 0
सेल्फी खिच्ने क्रममा तमोर नदीले बगाउँदा युवक बेपत्ता
प्रदेश १ एजेन्सी - March 7, 2020 0
धनकुटा । धनकुटा नगरपालिका–९ मुलघाटस्थित तमोर नदीमा सेल्फी खिच्ने क्रममा नदीले बगाएर आज दिउँसो एक युवक बेपत्ता भएका छन् । भारतको बिहार राज्यको पुर्णिया घर...
Editor-Picks एजेन्सी - February 2, 2021 0